Ovao ny tananao Twitter raha tsy mamoy ny mpanaraka anao | Martech Zone
Ovao ny tananao Twitter raha tsy mamoy ny mpanaraka anao
Alakamisy, Aogositra 24, 2017 Zoma, Septambra 1, 2017 Douglas Karr
Izahay dia niasa tamin'ny alàlan'ny rebranding avy amin'ny Blog momba ny haitao marketing ny Martech. Hizara lahatsoratra amin'ny ho avy izahay hoe maninona no andalovanay izany famerenanana izany - fa ny ankamaroany dia mifantoka amin'ny fanesorana ilay teny bilaogy avy amin'ny marika.
Soa ihany, ny ankamaroan'ny kaonty sosialy sy ny mpampiasa anay dia tsy nanana ny voambolana bilaogy ao amin'izy ireo - afa-tsy iray! Ny kaonty Twitter anay dia @mktgtechblog. Tena fanaraha-maso io hatramin'ny andro voalohany. Isaky ny misy manontany hoe iza ilay solon'anarana dia tsy maintsy tsipihiko ilay bilaogy mktg-tech-blog dia avereno imbetsaka.
Hatramin'ny nifindranay ny tranokala tamin'ny marketingtechblog.com mankany martech.zone, Nitady ny anaran'ny mpampiasa Twitter izay nanana io teny io aho Martech ao anatiny. Mampalahelo fa ny ankamaroany dia nalaina saingy hitako izany @martech_zone nisy.
Ajanony, aza atao fisoratana anarana…
Eo no mahadiso ny ankamaroan'ny olona. Misoratra anarana izy ireo a tantanana vaovao ao amin'ny Twitter ary avy eo mankanesa any amin'ny kaontiny tany am-boalohany ary lazao amin'ny olona rehetra fa nifindra izy ireo. Ny olana dia ny ampahany kely amin'ny mpanaraka azy teo aloha ihany no manao ny ezaka hanarahana ny kaonty vaovao. Raha ho anay, dia ho very mpampiasa an'aliny maro isika raha nanao izany.
Ahoana ny fanovana ny tantana Twitter-nao
Tsy toy ny tranonkala maro, mamela anao ny Twitter ovay ny anaranao! Afaka nanova ny @mktgtechblog ho @market_zone ao amin'ny kaontiko ary tsy hahavery ireo mpanaraka 34,000 izay niasa mafy izahay nanintona. Vantany vao afaka ilay solonanarana vaovao, dia nosoratanay avy hatrany ny solon'anaranay taloha ary nametraka hafatra izay nifindranay.
Mba hanovana ny tahiry Twitter anao dia mila mizotra mankany amin'ny Pejy fanovana (tsy ny pejin'ny piraofilina). Ny tananao dia voatanisa ao amin'ny saha voalohany. Azonao atao ny manomboka manoratra Twitter Handle vaovao hahitana raha efa voatokana na tsia. Vantany vao manavao azy amin'ny zavatra tadiavinao ianao dia vonjeo fotsiny ny fikiranao. Izao ianao nanova ny tantana Twitter-nao ary tsy very mpanaraka mihitsy!
Ahoana raha mitady ny tahonao Twitter taloha ny olona? Ity no ampahany milay - misoratra anarana ankehitriny ny tantanana taloha Twitter avereno indray ary apetraho ny hafatra hahafantaran'ny olona fa nifindra ianao.
Nametraka ity hafatra manaraka ity tamin'ny kaonty taloha izahay raha sendra misy olona manindry rohy amin'ny tranokala hafa na mahita ny kaonty amin'ny valin'ny karoka. Amin'izay dia ho fantatr'izy ireo fa nifindra izahay ary nanaraka anay tamin'ny kaonty nohavaozina.
Hey - raha nankamamy ity torohevitra ity ianao dia aza hadino ny manaraka anay amin'ny Twitter!
Tags: ovay ny tantana twitterovay ny solonanarana twitterovay ny kaonty twitter anaoovay ny tantana twitter-naoovay ny anaranao twitterahoana nomartech zonemifindra monina twitterTwittertantanana twittersolonanarana twitter
Sep 5, 2017 amin'ny 5: 40 AM
Heveriko fa sarotra ny manamboatra ny solonanarana raha tsy mamono ny mpanaraka azy. Ny fomba ilazalazanao dia tena manampy mba hahazoany tombony amin'izany. Hamaky bebe kokoa: https://goo.gl/1Qrnih